Goobaha Kubadda Cagta ee Kuuriya Online - Codes-ka Online Casino Bonus
Casino Online Xeerarka Bonus > Goobaha Kubadda Cagta ee Kuuriya Online
Loading ... Sanadihii la soo dhaafay, khamaarka online ee South Korea ayaa ku xaddidnaa in lagu tartamayo tartanka farasiga, baaskiilada iyo tartamada doonnida, iyo sidoo kale ciyaaraha bakhtiyaanasiibka. SportsToto (SportsToto) waxaa lagu aasaasay 1997. 2000, waxa ay sharciyeysay casinos, laakiin intooda badan waxay u adeegaan dadka ajnabiga ah. kaliya hal guri oo khamaar ah ayaa u furan dadweynaha. Maadaama mashiinnada dalxiiska ee dalka loo ogol yahay oo keliya casinos, waxay sidoo kale xadidan yihiin Koonfurta Kuuriya.
Muwaadiniinta Kuuriyada Koonfureed ayaa mamnuucay in ay ciyaaraan casino, oo aan ahayn degaan ahaan, laakiin sidoo kale dibadda. Hubi, dabcan, waa adag tahay in la dhaqan geliyo mamnuucidan, laakiin waxaa la siidaayay ciqaab adag sida waafaqsan sharciga "Qofka ajnabiga ah" oo leh mudo ugu yar oo xabsi ah 3 sano iyo ganaax ah ilaa 25 000 US dollars.
Muwaadiniinta Koonfur Kuuriya ayaa loo oggol yahay inay ku ciyaaraan saaxiibo iyo xubno ka tirsan qoyskooda qadar yar (oo ka yar xantiyo 10). Waxaan ku qorneynaa khadkeena khamaarka internetka ee dalka, waxaa jira laba lootaris: Lotto iyo Toto. Midka labaad waa nooc ka mid ah ciyaaraha isboortiga.
Koonfurta Kuuriya, ma jiro sharci khamaar oo online ah. Isla mar ahaantaana waxaa jira xeerar dhowr ah oo loogu talagalay in la yareeyo ciyaaraha bulshada iyo fiidiyaha. Waqtigan xaadirka ah, midna ma joogi karo heerka sharciga ah ee goobaha kontaroolida casinos ee dalka. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira duurjoogo sharci darro ah oo ay maamulaan kooxaha dambiilayaasha abaabulan. Marka ay ogaadaan hay'adaha fulinta sharciga, goobahaasi waa la xidhaa isla markiiba, ka dibna sida ugu dhakhsaha badan u furfuran kuwa cusub.
Boqolkiiba halboolka dadweynaha Kuuriyada Kuuriya ayaa soo booqda goobaha khamaarka ee gudaha iyo dibaddaba. Maadaama ay dawladdu qaadatay dhaqaalaheeda dhaqaalaheeda, waxay ku dhawaaqday qorshe ay ku bilaabi doonto dagaal culus oo lala galo shirkadaha shisheeye. Kordhinta diiradda saarista boggaga internetka ee tartanka ciyaaraha.
Eeg liistada goobaha casino ee aqbalaya ciyaartoyda ka socota Koonfurta Kuuriya, oo bixiya cayaaro tayo sare leh oo ammaan ah. Halkan waxaad ka heli doontaa waxyaabo badan oo madadaalo ah oo ka imanaya mashiinnada moobiilka si loo ciyaaro casriyeynta oo ka soo jeeda kuwa sida caanka ah ee caanka ah sida NetEnt, Merkur, IGT, Novolin, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming, iyo kuwo kale oo badan. Waxa kale oo aad akhriyi kartaa dib u eegista boggaga internetka ee casino, si aad u ogaatid dhiirigelinta ugu wanaagsan ee internetka, gunnooyinka iyo fursadaha lacag bixinta ee la heli karo ciyaartoy ka socota Koonfurta Kuuriya.
Si kastaba ha ahaatee, Lena, aad si fiican u ogyahay in siyaasaddu aysan i xiiseyneynin, laguma sheegi karo khamaarka. Waxay ku taallaa Seoul, casino ugu weyn ee Kuuriya - Paradise Casino Walkerhill.Ono waad jeclaan doontaa sababta oo ah waxay kobcisaa aasaaska khamaarka mid ka mid ah jilayaasha ugu jecel badan - Robert De Niro. Ama ma jeceshahay Al Pacino? Wax kasta oo ay ahayd, sida De Niro sawirada boodhadh badan. Waxaa jiray daqiiqado markii aan bilaabay in aan u maleyno inuu yahay qofka iska leh tooska ah ee Paradise Casino Walkerhill. Guud ahaan, haddii ay run tahay, lama yaabi lahaa.
Paradise Casino Walkerhill waxay ciyaaraan dadka ajnabiga ah, badanaaba muwaadiniinta jasiiradda ah. Kuuriyaanka laftoodu waa uun shaqaalaha oo kaliya: Maamulayaasha ganacsadaha, kuwa sugaya, barayaasha, farshaxanka iyo kuwo kale. Halkaan, shaqaalaha kiniinigaani waa mid aad u wanaagsan. Dhamaan nacaybka, xirfadlayaasha iyo kuuglida Ingiriisi, Japanese iyo luuqadaha kale ee shisheeye, oo kaliya leh Ruush sida wax aan aad u badnayn. Laakinse ma jiraan wax caqli-gal ah, gardarrada aan loo baahnayn iyo dabeecadaha xun. Wax walba oo aad jeceshahay, Lena.
Hadda waa waqtigii si faahfaahsan u tegi lahayd, sababtoo ah, sida aad ogtahay, iyaga waxaa ku jira midka badanaa lagu magacaabo curinta khamaarka. Casino wuxuu ku yaalaa Seoul ee degmada Kavanchzhin-gu Street Uokerhil-177 laakiin at Sheraton Hotel. Xitaa ha i weydiin sida aan u xasuusto cinwaanka. Dhab ahaantii, waxaan ka helay internetka, iyo khadka ugu wayn ee tagsi tags, kaliya u sheeg darawalka magaca.
Walkerhill waxay u egtahay mid aad u wanaagsan dibadda iyo gudaha. Sawirada kaliya ee khamaarka waa la mamnuucay, marka laga reebo kaliya bar iyo makhaayad. Milkiilayaasha cayaaraha ma rabaan in ay nasato macaamiisha ay ku xadgudbeen flashka. Intaa waxaa dheer, dadka qaarkiis way ka xishoodaan hiwaayadahooda hiwaayadda. Guud ahaan, sababahaas oo leh sawir dhab ah oo dhab ah. Laakiin ha ka welwelin, Lena, wax aan weli ku guuleysan toogasho.
Paradise Casino Walkerhill waxay shaqeyneysaa saacad kasta oo aan kala go 'lahayn. Marka la eego muuqaalka kantaroolka wajiga iyo qaar ka mid ah shuruudaha aadka u adag. Haddii aan Lena looma oggolaan karin, haddii aad xirtid mid ka mid ah dharkooda qarsoodi ah, oo aabahaa kama maqnaan doono qoysaska gaaban iyo dhirbaaxo, xiran maryo wasakh ah. Xitaa inkastoo xaqiiqda ah in deriska Japan, muuqaal ayaa loo tixgelinayaa mid la aqbali karo.
Hadalkaas oo ka hadlaya Japan, guriga, guurkaasi waxaa loogu talagalay xasiloonida, qabow iyo midka kale, laakiin dibedda sida dib u bedelka. Paradise Casino Walkerhill Waxaan nasiib u yeeshay inaan la kulmo nin la yiraahdo Tanaka Esutigatsu. Markii uu isbarbardhigay, mar mar waxaan waydiiyay inuu yahay xubin ninja qabiil. Wuxuu bilaabay inuu qosliyo, isagoo muujinaya ilkaha qallafsan oo wuxuu sheegay in qayb ka mid ah qabiilka Honda. Kadibna waxaan soo jeediyay rooti si aan u fahmo. khamriga loo dulqaadanayo Japanese xun - sidaas ayaan had iyo jeer u sheegay, mana aanan rumaysan. Laakiin ka dib nus saac markii la isticmaalayay iskudhafka kala duwan Tanaka si lama filaan ah ayuu u iloobey ingiriisi, waxaanan jecelahay inaan ku dheelo miiska blackjack. Hadalku waa run. Waxay mar horeba bilawday aragti gaaban adeegga amniga. Hase yeeshee, ninkeyga ayaan joogaa, oo waxaan ka fadhiistay miiska.
Sidaas ayaad ogtahay Lena, ciyaaro madadaalo ah oo qumman. Sidaa daraadeed waxaan go'aansaday in aan caawiyo jasiiradda saboolka ah ee Japan waxayna iibsadeen jajabyo qaar. Ciyaarta ayaa bilaabatay, nasiib uma lihi, $ 3,000 waxay tagtay Sanduuqa Relief Fund. Isla mar ahaantaana, Tanaka si qarsoodi ah ayuu ku guuleystay. Wuu u ekaaday wakhti xaadirkan, oo caruurnimaduna si farxad leh ayay ugu faraxday guulo kasta. Waxaan go'aansaday in isaga iyo wax walba ay u socdaan si ay u soo wacaan. Wadahadal ayaa i joojiyay daqiiqado wanaagsan 40. Marka dib loo soo celiyo Tanaka mar horeba wuxuu ku guuleystay inuu ka tago xawaare gaar ah 15,000. Wuxuu bilaabay inuu ooyayo oo uu soo bandhigo inuu dhigo jaakad, shaati, kabo, iyo saacada Casio. Natiijo ahaan, ilaaliyeyaashu waxay keeneen japan, inkastoo xaqiiqda ah in aan isku dayo inaan iyaga joojiyo. Si aan macquul ahayn. Laakiin waxaan u maleynayaa inaad fahamsan tahay nuxurka Lena - sida kuwa Japan ah ee saacadaha naadiga ah ee firaaqada.
Ha welwelin, Lena. Iyadoo Tanaka uu xaq u leeyahay. Wuxuu ku noolaa Sheraton. Waxa aan ogayn. Guurgu wuxuu igu soo celiyay inaan keeno guriga Tanaka, taas oo aan ku fariistay taksi iyo waxaan bilaabay inaan weydiisto meesha uu ku nool yahay. Halkan Japanese poluzasnuvshy ah ayaa bilaabay in ay qaadato qaar ka mid ah bilibanku. Taas oo aan ka jawaabi karo oo kaliya: "Xagee baad ku dhuumaneysaa noloshiisa!" Sidaa darteed, teleefoonkiisu wuu dillaacay oo si lama filaan ah ayuu kor ugu kacay. Waxaan Japan u keenay albaabka hudheelka, ka dib markii ay shaqaaluhu ka caawiyeen inuu helo qolkaaga. Later waxaan ogaaday in Tanaka - nin caadi ah. Haa, tani waa caadi, oo laga yaabo inay awood u yeelato inay ka baxdo casino $ 15,000. Inkastoo, waxay noqon kartaa sharafta Japan ee sharafta leh.
Waxaa fiican inaad ku laabato Paradise Casino Walkerhill. Blackjack waa runtii, laakiin in ugu weyn ee casino Korea, waxaa jira ciyaaraha kale halkaas oo 7 kala duwan roulette, 15 miisaska madadaalada, oo ku saabsan mashiinada 150, miisaanno darsin oo loogu talagalay poker iyo craps, iyo sidoo kale kakoe - tirada aan la qiyaasi karin ee jadwalka baccarat. Ma garanayo sababta ay dadku uga fikiraan Koonfurta Kuuriya, ciyaarta waa mid aad u caan ah.
Inkasta oo baccarat weli uu dalbado goobo gaar ah, laakiin uma badna inay awood u yeesho inay la tartanto Texas Hold'em ama cajalad. By jidka Walkerhill way qurux badnayd:
Lena, ha u xukumaan si adag oo aan sawir madhan oo aan madhan, oo la mid ah sida la filayo inay ku adag tahay. Oo maahee ilaa ay ka yeelayso. Muuqaalka guud ee Walkerhill ugu fiican ayaa soo bandhigaya sawirkan:
Waa hagaag, waa waqtigii aad ku qaadan laheyd sanduuqa Paradise Casino Walkerhill. Sidaas awgeed, waa shaqaale fiican, shaqaale fiican, barkad weyn iyo makhaayad, dooro badan oo cayaaro ah. Maxay noqon kartaa faa'iido darrada? Dareenka ilaalinta joogtada ah, sidaa daraadeed waxaa jira khadka casiin ah oo aan si haboon u raaxayn. Ku laabo Jannada casriga ah Walkerhill tiro aad u badan oo loogu talagalay baccarat, laakiin tani waa dalab shakhsi ah. Sida hadalku u socdo: Ha jeclaanin kaararka - leexo mootada.
Weli Janno Casino Walkerhill waa meel fiican. Robert De Niro maaha talo xun. Laakiin haddii aadan aamminsanayn Lena Robert, ma kaxeyn kartid, laakiin waa fiican tahay inaad tagto oo aad iska hubiso khibrada shakhsi ahaaneed. Xitaa waxaan bixin karaa lacag. Ha daalin, sida Janno Casino Walkerhill waan jeclahay.